यस्तो छ लोकसेवा आयोगको कार्यतालिका
निशान न्युज आश्विन १०, 2077
काठमाडौं । के तपाई लोकसेवा आयोगको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ? के कोरोना संक्रमणले स्थगित भएको लोकसेवा आयोगका विज्ञापनहरु नखुल्ने हुन् की भनेर चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो ? यदी त्यसो हो भने तपाईको सबै चिन्ता दूर गर्दै चाँडै लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम थाल्दैछ ।
कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएका लोकसेवा आयोगका सबै परीक्षा धमाधम सञ्चालन हुने भएका छन् । कोरोनाका कारण १० हजार बढी पदमा परीक्षा हुन सकेको थिएन ।
सरकारले लोकसेवा आयोगको स्थगित परीक्षा सुचारु गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगले यसअघि रोकिएका विभिन्न सेवा समूह, श्रेणी तथा तहका परीक्षा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत वर्ष रोकिएका शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाको दोस्रो चरणको परीक्षा सुचारु हुँदैछ ।
न्याय सेवातर्फका अधिकृत पदको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पत्रको परीक्षा क्रमशः १८, १९ र २० कात्तिकमा हुनेछ । व्यवस्थापिका संसद्तर्फ पहिलो पत्रको परीक्षा २१ कात्तिकमा र दोस्रो पत्रको परीक्षा २२ कात्तिकमा हुनेछ ।
परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण र संसद् सेवातर्फ खुला तथा समावेशी तर्फको दोस्रो चरणको परीक्षा २३ कात्तिकदेखि सुरु हुने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
नायब सुब्बाको परीक्षा पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । नायब सुब्बातर्फ पनि दोस्रो चरणको परीक्षा भएको थिएन । लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले नायब सुब्बाको दोस्रो चरणको परीक्षा मंसिरमा गर्ने गरी तयारी थालिएको जानकारी दिए ।
यसअघि रोकिएको सहसचिवतर्फको कृषि सेवातर्फ बाँकी रहेको पदमा समेत परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । सूचना प्रविधितर्फ आइटी सहसचिवको स्थगित लिखित परीक्षा पनि छिट्टै लिने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।